मेरी प्यारी फुच्ची : new nepali youn story - Nepali Sex Story
Home fuchi kanda nepal ko chori Nepali Sex Story in Nepali Nepali Youn Katha new nepali youn story yaun katha यौन कथा मेरी प्यारी फुच्ची : new nepali youn story
Hello Nepali Youn Katha Readers, उनले नै मलाई मेरो नक्कली फेसबुक मा रिक्वस्ट पठायकि । त्यो दिन मेरो फेसबुक मा १ जना ले अन्फ्रेन्ड गरेको रहेछ त्यसैले मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै उनि मेरो साथी भई हालिन । नत्र भने सधै ५००० जना ले भरेको हुनाले मैले नयाँ साथी बनाउन सक्दिन थिय ।यो नै यौ्टा सम्योग थियो । तर मैले सामान्य नै ठानेर मेरो साथी बनाय । तब सम्म मैले मेरो ब्लग को लिन्क पढ्नको लागी पठाय म्यासेज बाट जुन मेरो १८+ ब्लग को लिन्क थियो जो प्राय मेरो सबै नक्कली साथी हरु लाई पठाई सकेको थिय । सायद उन्ले मैले पठाको लिन्क क्लिक गरिन होला अन्जानै मा । किनकी उन्ले म्यासेज पठाईन म त १३ बर्ष कि मात्रै भए । मेरो ब्लग को माथी नै १८+ लेखियको हुनाले होला उनि झस्की छिन । म पनि झस्के अनि तुरुन्त माफी मागे अनि त्यो लिन्क नपढ्न अनुरोध पनि गरे । मलाई नरमाईलो लागयो, मन भारी भयो । १३ बर्से बालिका लाई कुमार्ग देखाउने भुल गरेको मा पापी मन लाई धिक्कारे । तर बन्दुक बाट छुटेको गोली कहाँ फर्कन्थ्यो र ? मेरो म्यासेज गै हाल्यो उन्ले पनि मेरो ब्लग पढ्ने नै भईन ।
बेलुका तिर उन्ले म्यासेज गरिन “मैले पढे नि तपाईंको ब्लग्” भनेर । मैले भने “नपढ्नु पर्ने थियो पढिछौ , अब नपढ्नु” । यो त मन पर्ने खाना चखायर अब नखाउ भने जस्तै भो कस्ले मान्थ्यो र । मेरो बिचार मा उन्ले दिनभरी मा धेरै वटा कथा पढी सकी छिन । तर पनि मैले कस्तो लागयो त कथा हरु भनेर सोध्ने हिम्मत गरिन । मैले खाली यो १८+ लाई हो भने । उन्ले कस्तो धेरै छाडा रहेछ भनिन मैले फेरी भने यो ब्लग बयस्क को लागी हो नि । मेरो गल्ती अब म बाट नै सुधृने वाला थियन । उन्ले सबै कथा हरु पढ्न थालिन । न त म मेरो ब्लग बन्द नै गर्न सक्थे न त उन्लाई पढ्न बाट रोक्न नै सक्थे । उनि साचिनै १३ बर्ष कि थिइन्, उन्लाई नेपाली फोहोरी अनि छाडा शब्द हरु धेरै थाह थियनन । उनि बेला बेला मा मलाई नै यो भनेको के ? त्यो भनेको के ? भनेर सोधी रहन्थिन्, म दोधार मा पर्थे । खाउ त कान्छा बाको अनुहार भने जस्तै भनु भने सार्है छाडा नभनु भने के भनु ? \_मैले सबै सही सही बताय । उनि पनि धेरै नै आतुर अनि उत्साहित भयर मलाई सोधी रहन्थिन ।
म बताई रहन्थे । उन्लाई केटा मान्छे हरुको फोहोरी कुरकानी थाहा नै थियन । जब मैले माल को अर्थ बताय तब उनि अलि रिसाईन । उनलाई त्यो सब्द ले केटी मान्छे या उनिहरुको यौन अङ्ग ईङ्गित गरेको मनै परेनछ । मैले उन्लाई सम्झाय सायद हिन्दी को असर परेको होला भनेर । हुन त केटा मान्छे को जात न हो यौन का कुरा मा सधै अगाडी अनि पापी पनि । मैले उन्लाई अनयाँसै मा बिभिन्न बाहाना बनाएर त्यस्ता कुरा हरु सोध्न थालेको थिय । तर उनि पनि भटा भट जानेजती सबै भन्थिन । मैले जे सोधे पनि उनि उत्तर दिन्थिन । मैले त्यसैले जे पनि सोध्न थलेको थिय । मैले अब भुल्न थालेको थिय उनि भर्खर १३ बर्स पुगेकी भनेर । किन किन उनि मलाई मन पर्न थालेकी थिईन । उनि माया प्रेम को कुरा पनि सुनाउथिन्, मैले भुरा भुरी हरुले के माया गर्नु र भन्दा अलि सिरियस हुन्थिन । १-२ दिन को च्याट पछी मैले उन्को बारेमा आफै अन्दज लगय उनि १३ बर्ष कि हुन तर बिचार भने १८ बर्से तर भाबना भने १३ बर्से नै ।उनी पढन मा पनि तेज हुनु पर्छ, अनि जनरल नलेज र यक्सट्रा यक्टिभिटी मा पनि अगाडी हुनु पर्छ । खोइ किन हो मैले पुरा हप्ता नै उनि सङ्ग च्याट मा समय बिताय ।
new nepali youn story
यो मेरो पहिलो घटना थियो फेसबुक च्याट मा १ हप्ता झुन्डेर बसेको । कुन कुरा ले हो कुन्नी म आफै अलमल भएर लागेको । म आफै लाई सोद्थे के १३ बर्से केटी को अनैतिक आस ले हो ? के उनि सानो भए पनि सेक्स को कुरा गर्थिन तेसैले हो ? । । ।अह पक्कै होईन । म मरेको थिय त उन्को स्पस्ट प्रतिकृया ले यानेकी उनि फ्र्यान्क थिईन सबै मामला मा ।मतलब सबै बिसय को उत्तर दिनमा । मैले कोही कोही केटी सङ्ग बोलदा प्राय उनिहरुले आफ्नो या आफ्नो बर्ग कै यौटा दायरा हुन्छ जस्तो वा केटा सङ्ग बोल्दा अलि लिमिटेड हुनु पर्छ भने जस्तो या आफ्नो अलि भाउ राख्नु पर्छ भेने जस्तो गरेको लाग्दथ्यो ।तर उनि मा अह मैले म र उनि मा केहि फरक देखेको थिईन । त्यसैले मलाई उनि आफ्नै जस्तो लाग्थ्यो । आफै जस्तो लग्थ्यो । खाली यौटा फरक थियो, उनि अलि अलि जिद्दी थिईन भने म अलि रिसहा ।कुरै कुरा मा मैले उन्लाई बिहे गर्ने कुरा गरे ।साचै म अब उनि बिना बाच्न नसक्ने नै भयको थिय, बिहे कहाँ बाट हुनु उनि बल्ल साढे १३ बर्ष भयकी थिइन ।मैले त अरु ३-४ बर्स कुर्ने निर्णय गरी सकेको थिय । बिचरी उनि सानी थिईन कैले हुन्छ भन्थिन कहिले हुन्न भन्थिन । हुन त मलाई ३-४ बर्स कुनै ठुलो कुरा थियन किनकी ३-४ बर्ष पछी उनि पनि १७ बर्से जबान हुन्थिन म पनि २३-२४ बर्से आत्मनिर्भर ।
आखिर फेसबुक ले पनि समय गाको थाहा नै भएन । हामिले सबै मन का भावना साटासाट गरी सकेका थियौ ।हाम्रो १ आत्मा थियो सारीर भने धेरै टाढा ।१ दिन को कुरा हो उन्ले मलाई म्यासेज पठाईन “आज त म १७ बर्षकी भय” । आहा मेरो खुशी को सिमना नै थियन मैले अब बिहेको कुरो गरे ।हाम्रो बिहे भयो । ३-४ बर्ष देखी मिलन को आस मा तड्पेको दुई मुटु को मिलन हुँदै थियो ।उनी पनि धेरै आतुर थिईन त्यो भन्दा मेरो धैर्यता को बाध टुट्न थलेको थियो । सुहाग रातको कती पनि समय खेर नफाली मैले उनलाई आफ्नो आङालो मा बेरे ।उनी पनि म तिर टासिन थालिन ।मैले उन्को तातो ओठ मा किस गरे ।गाला मा अनि घाटी मा पनि किस को बाडी नै बगे ।यता मेरो हात भने उन्को त्यो कोमल अनि सना चिटिक्क परेको बक्ष्यस्थल मा कपडा बाहिर बाट नै स्पर्स गर्न लागी परेका थिय ।
अब मैले नै उन्को माथी तिरा का भित्री कपडा खोल्न थाले ।उनी उत्तेजित भएर छट्पटाउदै थिइन भने म पनि धेरै जोस मा उन्को नाङो छाती सङ्ग खेल्न थाले । म भने उनको तो दुई अत्यान्तै कोमल हिमचुली मा खेल्दै थिइन भने उन्ले पनि मेरो लौरो समायर मुसर्दै थिइन ।केहि बेर को खेल पछी मैले आफ्नो कपडा खोले अनि उन्को छातिमा मेरो नाङो छाती टासे । हामिले यक अर्का को मुटु को धद्कन साटासाट गरेउ । तर मेरो हात ले उन्को पुतली नानी लाई माया गर्न भने छोडेको थिएन । । । पानी पानी भएकी थिईन पुतली नानी म । मैले उन्को त्यो बस्त्र पनि खोलिदिय मैले मेरो पनि खोले । अब समय धेरै नजिक आउन लागेको थियो पुतली नानी र बद्मास भाइ को मिलन हुनेबेला । म अब उनि माथी लपक्क टासियार आफ्नो भाई लाई पुतली नानी तिर सोज्याउनै के लागेको थिय कसैले हाम्रो कोठाको ढोका मा लात्त्ती हाने को जस्तो लाग्यो ।मान्छे हरु कता कता आयो आयो भने जस्तो लागयो । म झासङ्ग झास्केर बिउझिय ।थुक्क सपना पो देखेको रहेछु ।भुक्म्प आयर मान्छे हरु भागदै थिय । म चही टुटेको सपना अनि उठेको भाई सम्हाल्न नै नसकेर आफ्नै बेड्मा पल्टी रहे ।मेरी प्यारी फुच्ची सँग सपना मा पनि मिलन हुन नदिने भुकम्प लाई गाली गर्दै म त्यतिकै पल्टिदै सुती रहे । मलाई आज भुकम्प देखी डर होईन धेरै रिस उठी रहेको थियो ।
fuchi kanda nepal ko chori Nepali Sex Story in Nepali Nepali Youn Katha new nepali youn story yaun katha यौन कथा